अबकाे सत्ता समीकरण कस्तो हाेला ?, कसकाे कति सिट ? – Karnalidrishti
अध्यक्ष दाहालले मंगलबारै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेट गरे
कर्णाली दृष्टि संवादाता २६ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०८:१५
काठमाडौँ:सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकतालाई बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक दलहरूले नयाँ सत्ता समीकरणको गृहकार्य थालेका छन् । केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा छन्। तर, माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको बैठकले विश्वासको मत फिर्ता लिने/नलिने विषयमा कुनै निर्णय गरेन।
कसकाे कति सिट ?
माओवादी केन्द्रः ५३
जसपाका नेताहरूमा भने ओली नेतृत्वको सरकारमा रहने या विकल्पका रूपमा आउने सरकारलाई साथ दिने भन्ने दुविधा देखिन्छ। जसपा नेताहरूले सरकार गठनकै पेरिफेरीमा रहेर दुवै पक्षबाट ठोस प्रस्ताव नआएको बताएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाभित्रको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पक्षका नेताहरूसँग भित्री रूपमा गरेको भेटले पनि दाहाल–देउवालाई झस्काएको छ। जसपाभित्र पनि यो विषय सन्देहपूर्ण रूपमा उठेको छ।
‘सत्ता साक्षेदारी कोसँग मिलेर गर्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले कार्यदल बनाउने भएका छौं। त्यो कार्यदलले संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगायतका विषयमा रहेर सबै पक्षसँग छलफल गर्छ’, दलको बैठकपछि सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, ‘हाम्रा एजेन्डाहरूमा सहमति भए हामी सरकारमा जान सक्छौं। त्यसका लागि हामी खुला छौं।
सुर्खेत :कर्णाली उत्सव दोस्रो संस्करण आजबा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सुरु भएको छ । वीरेन्द्रनगरको बुलबुले उद्यानमा कर्णालीलाई चिन्ने,चिनाउने गरी बुधबारदेखि ऋति फाउण्डेशनले विभिन्न सङ्घ–संस्थाको समन्वयमा कर्णालीको विविधता, भेषभुषा, भाषा, मौलिक संस्कृति, विकास, पूर्वाधारका बारेमा बहस गर्ने उद्देश्यले उत्सवको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सभ्यता, संस्कार, हिजोको […]